बाँके । ईलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाह र लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो नेपालगञ्जबाट खटिएको प्रहरी टोलीले लागूऔषधसहित १ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा दाङ तुल्सिपुर उपमहानगरपालिका-१ बस्ने १८ वर्षीय समिर ओली रहेका छन् । उनलाई प्रहरीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका-१५ स्थित जमुनाह चेक प्वाईन्टबाट मंगलबार दिउँसो पक्राउ गरेको हो । उनको साथबाट अवैध लागूऔषध ब्राउनसुगर ८ ग्राम ५ सय मिलिग्राम बरामद भएको प्रहरी ... read more...
सगरमाथा निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गा यती समूहको कब्जामा
२०७६ मंसिर १८ गते १०:२३
काठमाडौं । १० मंसिर ०५८ मा सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीमा युद्धरत तत्कालीन माओवादीले हमला गर्‍यो । सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारीसहित कामु मालपोत अधिकृत भीमबहादुर सम्बाहाम्फेको पनि निधन भयो । घटनामा मालपोतका सम्पूर्ण स्रेस्तासमेत जलेर खरानी भए । देशका लागि यो ठूलो त्रासदी थियो, तर यती एयरको समूहका लागि भने अवसर । मालपोतका स्रेस्ता जलेको र अधिकृतको समेत मृत्यु भएको ‘मौका’मा नयाँ क ... read more...
सामाजिक सञ्जालबाट पैसा उठाउँदै सामान नपठाउने दुई जना समातिए
२०७६ मंसिर १७ गते १३:१०
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न व्यक्तिहरुलाई भारतीय मोबाइलबाट फोन गरेर सस्तोमा आइफोन, ल्यापटप, मोबाइल, क्यामरा, घडी, श्रृंगारका सामाग्रीलगायतका सामाग्री पठाउने नाममा रकम उठाएर ठगी गर्ने दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नम्बर-८ का २२ बर्षीय अमिर थापा र भक्तपुर कमलबिनायकका २४ बर्षीय अमन अवाल रहेका छन् । उनीहरुलाई महानगरीय प्र ... read more...
ट्रिपर चालकसँग एक हजार घुस लिने सईको हातमा अख्तियारको हत्कडी
२०७६ मंसिर १७ गते ०९:१४
धनुषा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खटिएको टोलीले एक जना ट्राफिक प्रहरीलाई घुससहित धनुषाबाट पक्राउ गरेको छ । अख्तियारले घुससहित ट्राफिक प्रहरीका सई नविनकुमार झालाई पक्राउ गरेको हो । झाले ट्रिपर चालकसँग एक हजार घुस लिइरहेको अवस्थामा अख्तियारको कार्यालय बर्दिवासबाट खटिएको टोलीले रंगेहात पक्राउ गरेको हो । सई झाले ढुंगा तथा गिट्टी ढुवानीमा सहज गरिदिने भन्दै ट्रिपर चालकसँग सो रकम लिएकै ठाउँमा प ... read more...
सुनसरी । एक महिलालाई आश्रममा बोलाएर बलात्कार गरेको आरोप लागेका धार्मिक गुरु कृष्णदास गिरी उर्फ 'सिद्धबाबा' अस्पतालको बेडबाटै पक्राउ परेका छन् । उनलाई माइनर हर्ट अट्याक भएको भन्दै विराट नर्सिङहोम अस्पतालको आईसीयूमा राखिएको थियो । उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले एकाबिहानै अस्पताल पुगेर हत्कडी लगाएको हो । उनको जिल्ला अस्पातालमा स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको र प्रहरीले थप अनुसन् ... read more...
कास्की-२ मा नेकपाकी उम्मेदवार विद्या भारी मतान्तरले विजयी
२०७६ मंसिर १५ गते २०:०७
कास्की । कास्की-२ मा भएको उपनिर्वाचनमा नेकपाकी उम्मेदवार विद्या भट्टराई विजयी भएकी छन् । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार खेमराज पौडेललाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै उनी विजयी भएकी हुन् । उपनिर्वाचनमा विद्याले २४ हजार ३ सय ९४ मत प्राप्त गर्दा काँग्रेसका उम्मेदवार पौडेलले १५ हजार ९ सय ९१ मत प्राप्त गरे । उनले काँग्रेसका उम्मेदवार पौडेललाई ८ हजार ४०९ मतान्तरले पराजित गरिन् । विद्यासँग पराजित भएका पौ ... read more...
मतदान केन्द्रभित्रै बम बिष्फोट हुँदा पनि मतदान प्रक्रिया यथावत
२०७६ मंसिर १४ गते ०९:३६
कास्की । प्रतिनिधिसभा सदस्यका भइरहेको मतदान केन्द्रभित्रै बम बिष्फोट हुँदा पनि रोकिएको छैन । मतदान शुरु भइरहँदा एकाविहानै पोखराको तीन ठाउँमा बम बिष्फोट भएको थियो । पोखरा-९ नयाँबजारस्थित रहेको नवप्रभात मावि मतदान केन्द्रकै भित्रै बम विष्फोट भएको थियो । बम विष्फोटा हुँदा केही बेर भने मतदान रोकिएको थियो । त्यसैगरी, पोखरा १४ अर्मला र वडा ३ को सरस्वती माविमा मतदान केन्द्र नजिक पनि बम बिष्फोट भएको थियो ... read more...
९० हजार घुस लिँदा यसरी लाग्यो इन्स्पेक्टरको हातमा हत्कडी
२०७६ मंसिर १३ गते २१:२६
जनकपुर । विवाह पञ्चमीको सुरक्षार्थ खटिएका एक जना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) ले ९० हजार रुपैयाँ घुसमा लोभ गर्दा उनको हातमा हत्कडी लागेको छ । ९० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ पर्ने प्रहरी निरीक्षक रामकिशोर साह हुन् । प्रहरी निरीक्षक साहलाई जनकपुर-८ स्थित सीता प्यालेस होटलबाट शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ... read more...
प्रहरीको नाममा असुली गर्न खोज्ने चतुरवेदी यसरी समातिए
२०७६ मंसिर १२ गते ०९:११
पर्सा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय वीरगञ्जले प्रहरीको नाममा पैसा असुली गर्न खोज्ने एक जना युवकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर-५ बसोबास गर्ने २७ बर्षीय दिव्यप्रकाश चर्तुरवेदी रहेका छन् । हेटौडा मकवानपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर-९ घर भई हाल वीरगञ्ज बस्दै आएका अनन्त खतिवडासँग आफू क्राइम ब्राइन्च पर्साको प्रहरी निरीक्षक भएको भन्दै चर्तुरवेदीले थर्काएर पैसा असुली गर्न खोज ... read more...
२०७६ मंसिर ११ गते १८:४८
पोखरा । पोखराको कुमुदिनी होम्स माविमा चिनियाँ वृत्तचित्र र फोटो प्रदर्शनी शुरु भएको छ । कुमुदिनी परिसर गैह्यपाटन पोखरामा शुरु प्रदर्शनी विहिबारसम्म जारी रहने छ । चिनियाँ सांस्कृतिक केन्द्र नेपालको आयोजनामा कुमुदिनी होम्स्मा सो प्रर्दशनीको आयोजना गरिएको हो । बुधबार एक कार्यक्रमका वीच पोखरा महानगर पालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी, सांस्कृतिक केन्द्रकी प्रमूख सिताइ पाइमो र निर्देशक स्याउ च्याङले स ... read more...
पद-नायब सुब्बा, अवैध कमाई १५ करोड, विशेषमा दर्ता भयो मुद्दा
२०७६ मंसिर १० गते १९:०९
काठमाडौं । एक जना सुब्बाले पाउने तलब अनुसार कति सम्पत्ति आय-आर्जन गर्ला ? के तपाई अनुमान लगाउन सक्नु हुन्छ ? अवश्य पनि ! उसलाई आफ्नो घर चलाउन पनि धौं-धौं पर्छ । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक जना नायब सुब्बाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा १५ करोड विगो माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनी अरु कोही नभएर मालपोत कार्यालय कलैया दरबन्दी भई सिमरामा कार्यारत मदनप्रसाद गुप्ता ... read more...
साढे नौं लाख रुपैयाँसहित मध्यराति समातिए २३ जना जुवाडे
२०७६ मंसिर ९ गते १५:०४
काभ्रे । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख एसपी जयराज सापकोटाको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले साढे नौं लाख रुपैयाँसहित २३ जना जुवाडेलाई पक्राउ गरेको छ । धुलिखेल नगरपालिका-९, स्थित महेश रानाभाटको घरबाट जुवा खेलिरहेको विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरीले छापा मारेको थियो । पक्राउ पर्ने जुवाडेहरुमा घरधनी रानाभाटसहित भीमसेन तामाङ, कृष्णकुमार तामाङ, नेमा लामा, अर्जुन तिवारी, रमेश तिवारी, पुष्कर दर्जी, सुमन अधि ... read more...
चितवन मेडिकल कलेजको होस्टलमा हतियार भेटिएपछि हलचल
२०७६ मंसिर ८ गते १०:१६
चितवन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले शनिबार साँझ चितवन मेडिकल केलजेको होस्टल परिसरबाटै हाहतियार भेटेको जनाएपछि मुलुकभर अहिले हलचल भएको छ । प्रहरीका अनुसार बरामद भएको हतियार १११७ मोडलको अ‍ेरिकन पेस्तोल हो । प्रहरीले उक्त पेस्तोलमा लाग्ने म्यागेजिन र दुई वटा गोली पनि बरामद भएको जनाएको छ । त्यसका अलवा थ्री नट थ्री राइफल, गोलीको खोका र एसएलआर राइफलको ६ खोका, रातो र कालो चार मिटरसहितको ... read more...
फिर्केखोला बन्धक राखेर भोट मागियो, महानगर बन्यो मतियार
२०७६ मंसिर ६ गते १३:२८
पोखरा । भनिन्छ-चुनावमा लोली, बोली, धन, दौलत, इमान, जमान सवै बेचिन्छ । तर हुँदाहुँदा पोखरामा चुनावको बेला फिर्केखोला समेत बेचिएको रहस्य खुलेको छ । पोखरा महानगरपालिका कार्यालयले फिर्के खोला बन्धक राखेर स्थानीय फिर्के प्रभावित नागरिकहरूसँग गोप्य सहमति गरेको पत्र फेला परेको छ । यसअघि १० मिटर कायम गरिएको फिर्के खोलाको मापदण्ड अहिले उपनिर्वाचनको वेला महानगरले घटाएर एक मिटरमा झारेको सहमति पत्र फेला परेको ... read more...
मेड इन यूएस लेखेको स्वचालित पेस्तोलसहित समातिए मियाँ
सिराह । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहबाट खटिएको प्रहरी टोलीले दुई वटा स्वचालित पेस्तोलसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा कल्याणपुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित इटहरीका २१ बर्षीय अहमद मियाँ रहेका छन् । प्रहरीले मियाँलाई सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका वडा नम्बर (२ स्थित चतरीबाट पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहका प्रवक्ता डिएसपी अपिल बोहराका अनुसार उनको साथबाट मेड इन यूएसए लेखिएक ... read more...
काँग्रेस उम्मेदवार पौडेलको 'घरदैलो अभियान' रोक्ने प्रयास
२०७६ मंसिर ५ गते १९:०७
पोखरा । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार खेमराज पौडेलसहित कांग्रेसका नेताहरू घरदैलो अभियानमा जाँदा बाटो अवरुद्ध गरिएको छ । पोखरा-१६ बाट अर्मला जानेक्रममा अर्मलाकोटमा बाटो अवरुद्ध गरिएको कांग्रेस नेता ऋषि काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार अर्मला जाने बाटोमा ढुंगा थुपारिएको थियो । नजिकै डोजर राखिएको थियो तर चालक भने थिएनन् । यो कांग्रेस उम्मेदवारसहित नेताहरू आउने भन्ने चाल पाएर सुनियोजित रुपमै बाटो अवरु ... read more...
स्रोत नखुलेको ३५ लाख रुपैयाँसहित दुई युवक समातिए
२०७६ मंसिर ४ गते ०९:३९
बारा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा, नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरो तथा सुरक्षा प्रहरी वेस क्याम्प लंगडाचोको संयुक्त टोलीले अवैध हुण्डीका दुई जना कारोबारीलाई साढे ३५ लाख रुपैयाँ सहित पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा बारा सिम्रौनगढ नगरपालिका ७ का २३ बर्षीय सुनिल महतो र २२ बर्षीय राजनकुमार दुवे रहेका छन् । प्रहरीले उनीहरुलाई कारोबारीका रुपमा प्रस्तुत गरेता पनि स्रोत नखुलेको रकम बोकेर आउने रकम पास गराउने ... read more...
बाँके । इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले हतियारसहित पक्राउ गरेको नेपाल तरुण दल नेपालगञ्जका नगरसभापति सन्दीपजंश शाह पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेले सोमबार पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको हो । शाहसँगै पक्राउ परेका अन्य तीन जनाको हकमा भने १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग भएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले शाहसहित चारै जनालाई हातहतियार तथा खरखजना मुद्दामा पा ... read more...
काठ तस्कर र वन गस्ती टोलीबीच गोली हानाहान, काठ छाडेर भागे तस्कर
२०७६ मंसिर २ गते १३:५०
वीरगञ्ज । सडक सवडिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय वनबाट सालको काठ तस्करी गर्दै गरेको समूह र वन गस्ती टोलीबीच गोली हानाहान भएको छ । वन कार्यालय बढनिहारबाट प्रदीप तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा गएको गस्ती टोली र काठ तस्करको समूहबीच जम्काभेट भएको थियो । सो क्रममा तस्कर समूहले वनको गस्ती टोलीलाई लक्षित गर्दै एक राउण्ड फायर गरेपछि वन गस्ती टोलीले पनि दुई राउण्ड फायर गरेको डिभिजन वन कार्यालय पर्साले जानका ... read more...
बारा । प्रत्येक पाँच बर्षमा लाग्ने बारास्थित गढीमाईको मेला आज (आइतबार) बाट सुरु भएको छ । बलीका लागि प्रसिद्ध गढीमाईको मेला एक महिनासम्म चल्नेछ । बारोको सिम्रौनगढ नगरपालिका वडा नम्बर-१ स्थित बरियापुरमा लाग्ने गढीमाई मेलामा लाखौं भक्तजनको भीड लाग्ने गरेको छ । गढीमाईको मेलामा हजारौं राँगा, बोका, कुखुराको बली चढाइने छ । बलीका लागि मेला समितिले बधशाली बनाउने तयारी गरेको छ भने बधशालामा राँगाको मात् ... read more...